Okunye simulators flight
Flight Gear sendiza
Mayelana FlightGear (No izihloko)
FlightGear flight Simulator kuyinto evulekile umthombo, Simulator freeware akhiwa FlightGear Project. Ukukhululwa okokuqala ngo 1997, futhi kuze kube manje kwaba khona eningi ukukhishwa.
Naphezu kokuba freeware, FGFS kuyinto Simulator omuhle kakhulu futhi ubhekane namaqiniso. Kanye Simulator it self, konke okunye okuhlobene liphinde khulula ukulanda, ukusebenzisa kanye athuthukise. Ukulanda noma uma ufuna ukufunda okwengeziwe ngakho, ungenza it at the official FlightGear web site, www.flightgear.org .
Le ndawo main ukulanda izindiza ahlukahlukene, ezingaphezu kuka 400 kubo, ulapha github.com/FGMEMBERS .
Into Good ngakho wukuthi ungenawo ukubhalisa ukulanda indiza ofuna.
Scenery ingalandwa ngezindlela ezimbili, kwiwebsite noma ngokusebenzisa uhlelo TerraSync ngaphakathi Simulator. Futhi, kuye ngokuthi amandla PC yakho, ungakhetha phakathi default HD ezinhle.
FlightGear Ubuye-ke uqobo inethiwekhi yabadlali abaningi, kodwa ngeshwa akekho izindiza virtual asebenzayo, futhi akukho ukwesekwa for mp amanethiwekhi ezinkulu like VATSIM noma IVAO.
Isikhathi ukudala page: 0.115 imizuzwana